विचार/ब्लग Archives - KTMreports.com
१ जनवरी अर्थात् अंग्रेजी नयाँ बर्ष नेपालीहरुमा छुट्टै पहिचानको रुपमा परिचित हुदैछ। बिश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीहरुमा अंग्रेजी नयां वर्षको दिनमा नेपाली टोपी लगाएर मनाउन थालेका छन्। अंग्रेजी नयाँ बर्षको परम्परागत उत्सव मनाउने शैलीलाई नै डोमिनेन्ट गर्ने गरी सामाजिक सन्जाल फेसबुकभर टोपी लगाइएका तस्विर छरिएका देखिन्छन । नेपा...
पुष ९- बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खडग बहादुर बिश्वकर्मा प्रकाण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ६ महिना सरकार टिकाउन सम्मस्या भएको दावि गर्नु भएको छ ।अरु कसैका कारणले नभई आफ्नै पार्टीका नेताहरुका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई ६ महिना पनि सरकार टिकाउन कठिन्यायी भएको प्रवक्ता प्रकाण्डले बताउनु भयो...
दृष्टिकोण: अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदुत महामहिम लक्की शेर्पा प्रकरण र नया राजदुत
-मदन राज सिग्देल शनिबार २२, डिसेम्बर, सिड्नी अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदुत महामहिम लक्की शेर्पा माथी उनकै (पुर्व)चालक वाङ्छु शेर्पाले लगाएको आरोप प्रकरण अझै तातै छ, सेलाइसकेको छैन। राफिलो बन्दै गरेको अष्ट्रेलिया को परिवर्तित मौसम संगै यहाँको नेपाली समाजलाई पनि गर्माएको छ एकाएक, यो आरोप प्रकरणले। यस सम्बन्धमा प्र...
‘भोकानाङ्गा’हरूको देशमा २० करोडको चियापान
कात्तिक १८ दिलनिशानी मगर बीस करोडको चियापान भन्ने शब्द लेख्दा आवाराहरूले यो दिल निशानी मगर भन्ने मनुष्य त खुस्किएछ भन्लान् । तर डाक्टरको रिपोर्ट अनुसार, म खुस्किएको छैन । च्यालेन्ज भयो कि, यो स्तम्भको अन्तिम सम्ममा २० करोडको चियापानबारे पुष्टि गर्नेछु । केही आवाराबाहेकका, जो घरमा तरकारी केलाएर, बाबुनानी भुलाएर बसेक...
बिहेको पहिलो रातमा पढ्न छुटाउनु भयो ? ( अहिले सम्मकै सबै शृखला )
केहि दिन अघि देखि सामाजिक संजाल फेस बुकको ब्राम्हण समुदाय भन्ने पेजमा बिहेको पहिलो रातमा भन्ने कथाको एकदमै चर्चा भै रहेको छ। १० वटा शृंखला रहेको उक्त कथा प्राय सबै वर्गका मानिसहरुले मन परेका छन। लेखक पुष्प संजेलले लेखेको उक्त कथामा विवाहको पहिलो रातमा भएको घटना र त्यसबाट परेको असर लेखकले देखाउन खोजिएको छ। भाग १ बाटै चर...
एयर दुर्घटना सन्दर्भ ! ‘भाग्यले बाँचें’
हामी बंगलादेशमा भएको एउटा तालिममा सहभागी हुन गएका थियौं । हामी विभिन्न ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने १६ जना नेपाली थियौं । खासमा हिजो उड्नुपर्ने विमान आज उड्यो । हामी बंगलादेशबाट राम्रै तरिकाले आइरहेका थियौं । जब काठमाडौंमा ल्यान्ड गर्ने बेला भयो विमान अर्कै तरिकाले उडेको जस्तो अनुभव भयो ।हामी बंगलादेशमा भएको एउटा तालिममा...
रमा भट्टराई सामान्य अर्थमा सत्ता भनेको शक्ति केन्द्रित रहने स्थान विशेष, संस्था, पद्धति वा संस्कारलाई बुझाउँछ ।पितृसत्ता एउटा त्यस्तो सामाजिक संस्कार हो जसमा पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक भूमिकामा पिता, पुरुष वा लोग्नेमान्छेलाई प्रधान मानिन्छ र भौतिक तथा मानसिक रूपमा लोग्नेमान्छेको श्रेष्ठतालाई स्वीकार गरिन्छ । सामाजिक त...
अर्धनग्न भैंसी नचाउने बेश्यालय महोत्सवहरु बन्द गरौ, बरु राजस्व असुल्ने देहव्यापार खोलौ
काठमाण्डौ, देशमा अचेल महोत्सवको चटारो बढेको छ । तिनै सिजनेवल महोत्सवहरुमा प्रस्तुति दिने देशका नग्न गहनाहरुको चर्चा पनि खुबै चलेको छ ।जिउ डाल हेर्दा नत चट्टक मिलेको छ, बरु नाङ्गा भैंसी जस्तै देखिन्छन । गायको स्वर सुन्दा नत सुरिलो मनमोहक बनाउ छ, बरु बगेर्नो भैंसी कराएको जस्तो सुनिन्छ । नृत्य हेर्दा नत मनै लोभ्याउने अ...
कस्तो मार्मिक बेदना सुन्नै नसकिने ‘हे काल, कहाँ छस् ? चाडैं आइजा, मलाई लैजा, म चाडैं मर्न चाहन्छु’
“हे काल ! कहाँ छस् ? चाडैं आइजा । मलाई लैजा । म चाडैं मर्न चाहन्छु । भयो काल, यो भन्दा बढ्ता बाच्न सक्दिनँ म । यो भन्दा बढ्ता दु:ख नदे मलाई । मलाई मुसा मार्ने बिष खुवाएर चाडैं मारिदेऊ । “ यो मृत्युको पुकार कुनै चलचित्रको संबाद होइन । न त नाटक र कहानीको एक दृश्य नै । यो पुकार दुबै मृगौलाले काम गर्न छोड्नुभ...
चुनाव जितेर पनि लुक्न बाध्य रेशम चौधरी,यस्तो छ उनको असली रुप
काठमाडौँ | नेपाली सञ्चार माध्यममा अहिले कलाकार रेशमलाल चौधरी अत्याधिक चर्चामा छन् । भूमिगत अवस्थामा रहदै कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव अत्याधिक मतले जितेकाले उनको चर्चा चुलिएको छ ।२०७२ साल भदौ ७ गते एक नाबालक र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ जनाको हत्याको मुख्य नेतृत्वकर्ताको आरोप लाग...